I-EZCAD3 sisizukulwana esitsha sokumakisha isoftware, kunye nenkqubo ehamba phambili kwihlabathi kunye netekhnoloji yolawulo lwe-laser. Ukuhlaziywa kwe-EZCAD2 kumiswe ngokusesikweni ngo-2019. Eli nqaku liza kukukhokela ukuze uhlaziye isilawuli sakho sangoku kunye nesoftware kuhlobo lwamva nje ngeendlela ezintsha.
Yintoni umsebenzi owongezelelweyo?
1. Uku-Wiring kwangaphambili (i-JCZ iyakwenza)
Iphini yomlawuli we-LMC (isebenza nge-EZCAD2) yahlukile kumlawuli we-DLC (isebenza nge-EZCAD3). I-JCZ iya kubonelela ngabaguqulweyo ukuqinisekisa ukuba akukho zintambo zongezelelweyo zifunekayo.
2.Ukubonelelwa kwaMandla ahlukeneyo (iJCZ iya kwenza)
Umlawuli we-LMC, usebenza kunye ne-EZCAD2, usebenzisa i-DC 5V 2A amandla. Kodwa umlawuli we-DLC (usebenza ne-EZCAD3) ufuna i-DC 12V 2A amandla.
I-JCZ iya kubonelela ngombane omnye we-Mini DC 12V 2A njengomfanekiso ongezantsi.
3.Ulungelelwaniso ngokutsha （Kunye nezifundo zevidiyo）
I-EZCAD3 isebenzisa indlela echanekileyo yokulinganisa ukunciphisa ukugqwetha nokwenza ngcono ukuchaneka.
Siza kubonelela ngezifundo zevidiyo ukukukhokela ukuba wenze ulungelelwaniso oluphezulu, oluthatha imizuzu eli-15. Nceda ulungiselele irula kwangaphambili.
4. Iibhithi ezingama-64 ze-O / S kuphela
I-EZCAD3 ine-kernel engama-64, eyonyuse kakhulu ukusebenza kwesoftware. Inkqubo yokusebenza engama-64 iyafuneka kwaye i-WIN10 ineebhitithi ezingama-64 iyacetyiswa.
5. Ukuseta kwakhona isoftware (iJCZ iya kuyenza)
Ukuseta i-EZCAD3 kwahluke kancinci kwi-EZCAD2. I-JCZ iya kwenza useto lwangaphambili kuwe ngokokusetwa kwakho kwangoku.
6. Ukufakwa okungafaniyo.
Ubungakanani bomlawuli we-DLC (osebenza ne-EZCAD3) bohlukile kumlawuli we-LMC (usebenza ne-EZCAD2), oko kuthetha ukuba ukuba iikhabhathi zomatshini wakho azinandawo yaneleyo, kufuneka uzifakele ngaphandle kwekhabhinethi.
Uhlobo lwesithathu lokukhetha luyafumaneka apha ngezantsi.
A: Kuhamba ze isilawuli maleko kabini. Ungafaka ngaphakathi kumatshini wakho ukuba kukho indawo eyaneleyo okanye uyifake ngaphandle kwekhabhinethi ngaphandle kokukhuselwa.
B: Umlawuli we-DLC eneziciko. Ukuba umatshini wakho wekhabhathi akanayo indawo eyoneleyo, inokufakwa ngaphandle komatshini ngokukhuselekileyo.
C. Umlawuli we-DLC kunye nePC yomzi mveliso edityanisiweyo. Lungisa nje iliso elinye kwaye ulibeke ngaphandle kwekhabhinethi yomatshini.
Ukuzalisa ifom ngeziKhokelo zingezantsi.
1. Thatha umfanekiso womatshini wakho opheleleyo kwaye uwufake.
Umfanekiso womatshini uphela uya kusinika umbono ngokubanzi woqwalaselo lomatshini wakho.
2. Thatha imifanekiso yezona ndawo ziphambili ezifakiweyo kwaye uzilayishe ..
Vula ikhabhathi yomatshini wakho, kwaye uthathe umfanekiso wesilawuli kunye nomthombo we-laser, kunye nesikena se-galvo, esifakwe ngaphandle kwekhabhinethi. Nceda ufake imodeli kunye nenombolo yesiriyeli ukuba ikhona.
Umlawuli (Ngaphakathi kweKhabhinethi)
Umthombo weLaser (Ngaphakathi kweKhabhinethi)
Iskena seGalvo (ngaphandle kweKhabhinethi)
3. Cinezela ifolda yesoftware ye-EZCAD2 kwaye uyilayishe.
Cinezela ifolda ye-EZCAD2 kwaye uyilayishe kwifom. Oku kuya kusetyenziselwa ukwenza useto lwangaphambili lwe-EZCAD3.
4. Qinisekisa imisebenzi esetyenzisiweyo.
Ukuzalisa le fomu ingezantsi ngokweenkcukacha ukuze sikwazi ukuqinisekisa ubukho bokuhlaziya kunye nokwenza i-pre-wiring kunye nokuseta kwangaphambili ngaphambi kokuhambisa.